kuita bvunzo chirongwa template
Kuru Kuita Performance Bvunzo Chirongwa Template
Performance Bvunzo Chirongwa Template
Iyo yekuyedza bvunzo chirongwa template iyo inogona kushandiswa sezvazviri kana kushandurwa kuti ienderane neyako projekiti inoda maererano nezviitwa zvekuita.
Chinangwa chechikamu chino ndechekupa kuongororwa kwepamusoro-soro kwenzira yekuyedza kuita iyo inofanirwa kuteverwa kune chirongwa. Izvi zvinofanirwa kuendeswa kune vese vane chekuita nazvo uye zvinofanirwa kukurukurwa kuitira kuti vawane kubvumirana.
Sechikamu chekuburitswa kwe , zvinodikanwa kuti mhinduro yacho inosangana neyakagamuchirwa nzira, zvese maererano nenzvimbo dzinoshanda uye dzisingashande. Chinangwa chegwaro iri ndechekupa runyorwa rwekusaedza-kushanda kuyedzwa kwe mhinduro.
Gwaro iri rinofukidza zvinotevera:
Kupinda uye Kubuda Criteria
Vhoriyamu uye Performance Kuyedza Nzira
Performance Kuedza Mabasa
3. Nzira dzekupinda
Zvinhu zvinotevera zvebasa zvinofanirwa kuzadzikiswa / kubvumiranwa zvisati zvaitika kuitira kuti uenderere mberi nemabasa chaiwo ekuyedza kuita:
Asiri-anoshanda bvunzo zvinodiwa gwaro rinopihwa ne , ine akaenzana maNFRs pazvinogoneka
Iwo akakosha ekushandisa-makesi anofanirwa kuyedzwa kushanda uye pasina chero akakosha madhigi anoratidzika
Dhizaini Dhizaini Dhizaini yakatenderwa uye inowanikwa
Makiyi ekushandisa-makesi akatsanangurwa uye akawedzeredzwa
Performance bvunzo mhando dzakabvumiranwa
Mutoro majekiseni setup
Chero chero data setup rinodiwa - i.e. Nhamba yakakodzera yevashandisi yakagadzirwa mu
4. Buda Criteria
Basa rekuyedza kuita richapedziswa kana:
Izvo zvinangwa zveNFR zvasangana uye mhedzisiro yekuyedza miedzo yakaunzwa kuchikwata uye ichibvumidzwa.
5. Zvinodikanwa zveMagariro
Iyo bvunzo yekuita ichamhanyiswa ichipesana neshanduro yeiyo mhinduro (iyo yakatopfuura mayedzo anoshanda) uye yaitwa pane yakatsaurwa yekugadzira-senge nharaunda (pre-prod?) yakapihwa yekuyedza kuita pasina kuisirwa pane iyo nharaunda panguva yekuyedza kwekuita.
5.1 Load Injectors
Pachave neumwe kana anopfuura anozvitsaurira 'mutoro majekiseni' akamisikidzwa kuti atange unodiwa mutoro wekuyedza kuita. Iyo inorema injector inogona kunge iri VM kana akawanda maVM ane chiitiko cheJMeter inomhanya, kutanga zvikumbiro.
5.2 Maturusi Ekuyedza
Zvekushandisa zvishandiso zveBhuku uye Kuedzwa kwekuita zvichave:
Chishandiso chakavhurika-sosi mutoro wekuyedza. Kunyanya kushandiswa kwevhoriyamu uye kuyedzwa kwekuita.
Splunk ichashandiswa kutema matanda (Inogona kushandisa chimwe chishandiso - inoda kusimbisa pamwe nechikwata chekuyedza perf).
6. Vhoriyamu uye Performance Kuyedza Nzira
I mhinduro inofanirwa kuve inoitisa zvakakwana kugadzirisa zvinotevera mutoro maitiro.
N.B. Iwo manhamba ari mutafura inotevera ndeemuenzaniso chete - chaiwo maitiro anofanirwa kuiswa kana apedzwa na NFR gwaro.
6.1 Target Service Vhoriyamu
Maawa emaawa anowanikwa kubva kumhinduro yazvino ye [Y2019]. Yakajekesa imwe 'muenzaniso' kukosha kubva kuchirongwa template.
Sezvo hwerengedzo yeawa yepamusoro isina kukwirira, ivo vanozotorwa seyakananga kune yakatarwa mutoro bvunzo. Kuwedzera chinhu TBD izvozvi.
6.2 Nhamba yeVashandisi
Kuedzwa kwekuita kuchamhanya nevakawanda vevashandisi ve1000 [?]. Vashandisi vacho vanozogadzirwa mu zvisati zvaitika uye kuwanika kuburikidza Login API. Chikumbiro chega chega chinopinda neakasiyana userID.
JMeter chishandiso chinoshandiswa kuita ekuyedza kuita zvinyorwa. Mukati mezvinyorwa, pachave nezvisungo zvinotaurwa kuti zviongorore mametric ari pamusoro pamwe nemamwe macheki anoshanda kuti ave nechokwadi chekuti mhinduro dzakagamuchirwa pachikumbiro chega chega.
6.4 Takura Maprofayiri
Iwo mapakeji emitoro anofanirwa kugadzirirwa kuteedzera akajairwa mazuva ezuva rekufamba kuenda ku saiti. Ndokumbira utarise kuti traffic inongogovaniswa uye inogumira kune yeVatengi Kuzivikanwa uye Access Management chikamu chesaiti, i.e.
Pazasi pane muenzaniso muenzaniso wezuva:
Nzira yekutanga yekuita ndeyekutsvaga yekutanga. Tichishandisa chete mushandisi mumwe, isu tichamhanyisa simulation kwenguva yakati (semuenzaniso maminitsi mashanu) kuti tiwane avhareji yenguva dzekupindura kwese kwekupedzisira. Izvi zvinoona kuti nemushandisi mumwe chete isu tinokwanisa kuzadzisa zvikumbiro zvepamusoro pasekondi.
6.4.2 Kuyedza Mutoro
Mushure mekuunganidzwa kwematanho ekutanga, ipapo kuenzanisa kumwe, kunofanidza chimiro chemutoro, kunoitwa nenhamba yakawedzera yevashandisi kuyedza vachipesana nevhoriyamu. Pfungwa yeiyi bvunzo bvunzo ndeye kuyedza iyo system ichipesana neyakajairika zuva mutoro, kuenzanisa iyo ramp-ups, makwiriro ezuva, uye ramp-downs.
6.4.3 Kuedzwa Kunetseka
Chinangwa chekuyedzwa kushushikana ndechekutsvaga iyo yekupaza sisitimu, i.e. panguva ipi iyo system inova isingateerere. Kana auto-kuyera iri munzvimbo, bvunzo yekushushikana ichavewo chiratidzo chakanak panguva iyo zviyero zvehurongwa uye zviwanikwa zvitsva zvinowedzerwa. Zvekuedza kunetsekana, kuenzanisa kumwe chete kunoshandiswa pakuyedza mutoro kunoshandiswa asi iine yakakwira kupfuura inotarisirwa mutoro.
6.4.4 Kuyedza Spike
Spike kuyedza inosvitsa chakakura mutoro pane ino system mune inguva pfupi yenguva. Chinangwa chemuedzo uyu kutevedzera chiitiko chekutengesa semuenzaniso, apo nhamba hombe yevashandisi panguva imwe chete vanowana account yavo panguva pfupi yenguva.
6.4.5 Ongorora Kuyedza
Kunyorovesa kuyedza kunomhanya nemutoro bvunzo kwenguva yakareba yenguva. Chinangwa ndechekuburitsa chero kuyeuka kwekudonha uye kusapindura kana zvikanganiso panguva yekuyedzwa kweseko. Isu tinowanzo shandisa 80% yemutoro (inoshandiswa pakuongorora mutoro) kwemaawa makumi maviri nemasere, uye / kana 60% yemutoro kwema48hrs.
6.4.6 Kugara Kwenharaunda Kwayedza
MuSaturation point test isu tinoramba tichiwedzera mutoro zvakadzikama kuti tione kuti panguva ipi sisitimu inova isingateerere, kureva kuti kuwana pekutyora sisitimu maererano nemutoro.
7. Mabasa ekuyedza kuita
Izvi zvinotevera zviitiko zvinokurudzirwa kuti zviitwe muhurongwa, kupedzisa Performance Kuedzwa:
7.1 Performance Kuedzwa Nharaunda Vaka
Iwo majekiseni emitoro anofanirwa kuve neanokwana kugona uye anofanirwa kutarisirwa kure. Zvakare, iyo nzvimbo yeanopinda inofanirwa kubvumidzwa
Yechokwadi-nguva yekutarisa uye yekuzivisa mashandiro inofanirwa kunge iri munzvimbo uye inofanirwa kuvhara iko kunyorera, maseva pamwe neanoremedza majekiseni.
Matanda ekushandisa anofanirwa kuwanikwa.
7.2 Kushandisa-Kesi Kunyora
Chishandiso chekuyedza chekuita icho chinoshandiswa iJMeter
Chero chipi zvacho chinodiwa chedata chakakurukurwa kuti mashandisiro-makesi anyorwe
7.3 Muedzo Wemamiriro Vaka
Rudzi rweyedzo ichaitwa (Mutoro / Kushushikana nezvimwewo)
Iyo yekuremerwa chimiro / mutoro modhi inofanirwa kubvumidzwa kune yega bvunzo mhando (ramp-kumusoro / pasi, nhanho nezvimwe)
Sanganisa nguva yekufunga muzviitiko
7.4 Kuitwa Kwayedza uye Kuongorora
Iyi miedzo inotevera inofanira kuitwa nenzira inotevera:
Saturation Point Bvunzo
Sezvineiwo, 2 Bvunzo inomhanya yemhando yega yega bvunzo ichaitwa. Mushure meimwe bvunzo kumhanya iko kunyorera kunogona kuve kwakarongedzwa zvakanaka kuitira kuti iwedzere mashandiro ayo uyezve imwe bvunzo yekutenderera ichatanga.
7.5 Post-Bvunzo Kuongorora uye Kuzivisa
Tora uye dzorera kumashure ese akakodzera data data uye dura.
Sarudza iyo budiriro kana kutadza nekufananidza mhedzisiro yebvunzo kune zvinangwa zvekuita. Kana izvo zvinangwa zvikasazadzikiswa shanduko dzakakodzera dzinofanira kuitwa uyezve imwe bvunzo yekuitisa bvunzo ichatanga. Hazvizivikanwe kuti mangani maitiro ekuuraya achazodiwa kuitira kuzadzisa zvibvumirano zvakabvumiranwa.
Nyora uye upe zvabuda pabvunzo.
iphone 12 pro max lidar maapp
mafoni matsva 2017 t nhare
Google Pixel 2's 'Iyezvino Ari Kutamba' inogara iri-pamimhanzi inozivikanwa ficha haigone & apos; chive bhatiri hogi
Subway Surfers ndeyepasi & apos; mutambo wekutanga kusvika kune 1 bhiriyoni kurodha pasi paGoogle Store
Nhema Chishanu Pixel inobata: akanakisa madhiri ePixel 4, Pixel 3, Pixel 3a
Yakanakisa Cyber ​​Muvhuro smartwatch inobata 2020
Apple & apos; itsva iPod Touch inogona kuziviswa nekukurumidza mangwana
Iyo & apos haisi iyo Prime Day parizvino, asi Samsung & apos; s Galaxy S21 + 5G yatove yakachipa kupfuura nakare kose
OnePlus 6T yakadzikama girazi skrini inodzivirira ikozvino yawanikwa nerutsigiro rwe Screen Screen
Samsung Galaxy Buds Rarama vs Buds Plus
Ko gore rino & apos; s 5G iPhone 13 mamodheru anotaridzika seanopa mune ino vhidhiyo?
Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8: ndeapi & apos; akasiyana uye iwe unofanirwa kukwidziridza?